မအိပ်တဲ့ မြို့ ကလေး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Drama, Essays.. » မအိပ်တဲ့ မြို့ ကလေး
မအိပ်တဲ့ မြို့ ကလေး
Posted by မစုဥာဏ် on Oct 3, 2014 in Drama, Essays.. | 19 comments
မအိပ်တဲ့ မြို့ ကလေး (ပုံ- ရန်အောင်)
ဂျူတီကုတ် ကို ချွတ်ပြီး သက်ပြင်းရှည် တစ်ချက် ကို ချ လိုက်ပေမယ့် အမောတွေ က ပြေမသွားဘူး။
ကင်ဆာ ဝေဒနာသည်တွေရဲ့ နာကျင်စွာ ညည်းတွားသံတွေ၊ ပိုက်တန်းလန်းနဲ့ခလေးငယ်တွေ။ .. ဆေးရုံဝန်ထမ်းတွေ ကို မကျေမနပ် ပြစ်တင်ပြီး၊ မန်နေဂျာနဲ့ စကားပြောမယ် ဆိုနေတဲ့ လူနာပိုင်ရှင် မိသားစု တစ်စု၊ နံဘေးမှာ အဆက်မပြတ် မြည်နေတဲ့ ဖုန်း စတဲ့ လုပ်ငန်းခွင် က အမောတွေ ကြောင့်၊ အလုပ်ပြီး သွားပေမယ့် ကျွန်မစိတ်တွေ ပေါ့ ပါးမနေဘူး။
အိမ်ပြန်ဖို့ စဉ်းစားမိပေမယ့် “ကြွက်တွင်း သာသာလောက် ရှိတဲ့ အခန်းကျဉ်းထဲ … တယောက်တည်း ငေါင်တောင်တောင်နဲ့နေမယ့် အစား၊ မရောက်တာကြာတဲ့ မြို့ ထဲ ဘက်ကို သွားမယ်” လို့ဆုံးဖြတ်ပြီး ထွက်ခဲ့တယ်။
ကျွန်မ နေတဲ့ မြို့ ကလေး ကို ဘယ်တော့မှ မအိပ်တဲ့မြို့ (the city that never sleeps) လို့ ခေါ်ကြတယ်။ အများပြည်သူသုံး ကားတွေ၊ ရထားလိုင်းတွေ က ၂၄ နာရီ ပြေးဆွဲ ပေးနေပြီး၊ ညမှာဆို လျှပ်စစ်မီးတွေ ထိန်ထိန်ညီးလို့ ၊ လမ်းမတွေ ပေါ်မှာ လူတွေကလဲ မပြတ် သွားလာ နေတာကြောင့် အဲဒီလို တင်စားခေါ်တယ် နဲ့ တူပါရဲ့ ။
မအိပ်တဲ့မြို့ ကလေးမှာ အတည်တကျ နေထိုင်ဖို့ မဆုံးဖြတ်နိုင်ခင်က နယူးဂျာစီ နဲ့ ဝါရှင်တန်ဒီစီ မှာ ကျွန်မ သွား နေကြည့်ပါသေးတယ်။ သွားရေး၊လာရေး အတွက် ကားမ၀ယ်နိုင်ရင် ကြာရှည် မရပ်တည်နိုင်တာ က တကြောင်း၊ အလုပ် အကိုင်ရှာဖွေရတာ ခက်ခဲတာက တကြောင်း ကြောင့် ကြာရှည် မနေနိုင်တော့ပဲ နောက်ဆုံး ဒီမြို့ ကလေးကို ပဲ ကျွန်မ ရွေးချယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။
အစပိုင်းမှာ လူရှုပ်ရှုပ်၊ ကားရှုပ်ရှုပ်နဲ့ မြို့ လေး က ကျွန်မ အတွက် မျက်စိနှောက်စရာ ဖြစ်နေခဲ့ပေမယ့်၊ ကြာတော့လည်း ကျင့်သား ရသွားတယ်။ မိုးလင်းရင် အလုပ်သွား၊ မိုးချုပ်ရင် အိမ်ပြန်နဲ့ တခြား မြို့ သူမြို့သားတွေ လိုပဲ ကျွန်မ သံပတ်ရုပ်တစ်ခုလို လှုပ်ရှားတတ်လာခဲ့တယ်။
ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေ ထဲမှာ မကြာခန မြင်ရတဲ့ အတိုင်း မြို့ လေး က ခေတ်မီတိုက်တာ ကြီးတွေ နဲ့ခပ်ဆန်းဆန်း လှပါတယ်။ Manhattan ခေါ် မြို့ လယ်ကောင် ရဲ့ ဘေး ပတ်ပတ်လည် မှာ ရေတွေ ၀န်းရံလို့ ။ ပုံစံ ခပ်ဆန်းဆန်းနဲ့ဆောက်ထားတဲ့ အဆောက်အဦးတွေ က သူ့ ထက်ငါ မြင့်သထက် မြင့်အောင် နေရာယူလို့ ။ အရပ်ပုတဲ့ ကျွန်မ အတွက် တချို့မိုးမျှော် အဆောက်ဦးတွေ ရဲ့ ထိပ် ကို မြင်ရဖို့ နောက်ကို လှန်ကျတော့ မတတ် မော့ကြည့်ရတဲ့ အထိပဲ။
အတွေးတွေ နဲ့ လမ်းလျှောက်လာရင်း …လျှပ်စစ်မီးတွေ ထိန်ထိန်ညီးနေတဲ့ Times Square နားကို ရောက်လာတယ်။
Times Square မှာ ကမ္ဘာကျော် Broadway ပြဇာတ်ရုံတွေ၊ ရုပ်ရှင်ရုံကြီးတွေ၊ သက်ဝင် လှုပ်ရှားနေတဲ့ ကြော်ငြာ ပိုစတာ ဒီဇိုင်းတွေ ကြောင့် အမြဲလူစည်ကားလေ့ ရှိတဲ့ နေရာပါ။ တစ်နှစ် ကို နိုင်ငံခြားဧည့်ခရီးသွားပေါင်း သန်း ၅၀ ကျော် လာလေ့ရှိတဲ့ မြို့ ကလေးရဲ့စွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ နေရာ တစ်ခုလဲ ဖြစ်တယ်။
လွတ်နေတဲ့ လှေခါးထစ် တစ်ခုမှာ အသာ ၀င်ထိုင်ရင်း မြို့ လေးရဲ့ညအလှ ကို ကျွန်မ ငေးမော ကြည့်နေမိတယ်။ မြင်းလှည်းတွေ၊ ဆိုက်ကားတွေနဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်သူရိုက်..ကြော်ငြာပိုစတာကြီးတွေ မှာ ကိုယ့်ရုပ်ပုံပေါ်လာတာ ကို ကြည့်ပြီး လက်ခုပ် တီးသူတီး၊ Mickey Mouse လို (ဒါမှမဟုတ်) ဒီမြို့ လေးရဲ့သင်္ကေတ တစ်ခုဖြစ်တဲ့ လွတ်လပ်ရေးမိခင်ရုပ်တု (Statue of Liberty) လို ၀တ်စားထားသူတွေ နားမှာ ဓာတ်ပုံ ရိုက်ဖို့ တန်းစီသူတွေ က စီနဲ့ ။ ကင်မရာမီး တဖျပ်ဖျပ်၊ ရေမွှေးနံ့ ပေါင်းစုံ ကြား…တနေ့ တာ အမောတွေ ကို ခနတော့ ကျွန်မ မေ့သွားမိတယ်။
ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာ Naked Cowboy လို့ ခေါ်တဲ့ ကောင်းဘွိုင်ဦးထုပ် တစ်လုံး ကို ဆောင်း၊ ၀တ်လစ် စလစ် နဲ့ဂီတာတီးပြီး သီချင်းဆိုနေတဲ့ ကောင်းဘွိုင် နားမှာ လူတွေ ၀ိုင်းပြီး အားပေးနေတာကို လဲ လှမ်းမြင်နေရတယ်။ နှင်းတွေ ကျပြီး ချမ်းအေးလှတဲ့ ဆောင်းတွင်း မှာတောင် အဲဒီ ကောင်းဘွိုင် က အ၀တ်မပါတဲ့ အတွက် သူ့ပရိသတ်တွေကလဲ မနည်းပါဘူး။
ကျွန်မလို ပဲ လှေကားထစ်ပေါ် ထိုင်နေသူတွေ ဆီက စကားပြောသံတွေ ကို အာရုံစိုက်လိုက်မိတော့၊ တရုတ်၊ စပိန်၊ ပြင်သစ်၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ အိန္ဒိယ စသဖြင့် ဘာသာစကား မျိုးစုံလှတာကို သတိထားမိတယ်။ တလောက လုပ်ထားတဲ့ သုတေသနတစ်ခု မှာ ဖတ်လိုက်ရတာ..လူဦးရေ ၈ သန်းခွဲ လောက်ရှိတဲ့ ကျွန်မတို့ မြို့ ကလေးမှာ ၊ ဘာသာ စကားပေါင်း ၈၀၀ခန့် ပြောဆိုကြတဲ့ အကြောင်း မှတ်သားရဖူးတယ်။
လူမျိုးပေါင်းစုံ၊ ဘာသာပေါင်းစုံ တာ ကို က မြို့ ကလေးကို ပိုပြီးထူးခြားစေတယ် လို့ ထင်ပါတယ်။ အာဖရိကန်လူမျိုးတွေ အနေများတဲ့ ရပ်ကွက်၊ စပိန်လူမျိုးတွေ နေတဲ့ ရပ်ကွက်၊ ဂျူးလူမျိုးတွေ အနေများတဲ့ ရပ်ကွက် စသဖြင့် စုံစုံလင်လင်ရှိလှတယ်။
ကျွန်မ နေတဲ့ Queens အရပ်မှာတော့ အာရှနိုင်ငံသားတွေ နေတဲ့ နေရာပဲ ခေါ်ရမယ် ထင်ပါတယ်။ မြန်မာ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေ ကလဲ ဒုနဲ့ ဒေးပါပဲ။ ကုလားတန်း၊ တရုတ်တန်း စတဲ့ နေရာတွေ မှာ ပဲပြုပ်က အစ ဓညင်းသီးက အဆုံး ၀ယ်လို့ ရတယ်။
ဘယ်လောက်တောင် အာရှဆန်သလဲ ဆိုရင်…တရုတ်တန်းသွားလို့စားစရာမှာတဲ့ အခါဖြစ်ဖြစ်၊ အပေါ့ အငံ လိုလို့ တခုခု ထပ်တောင်းတဲ့ အခါ ဖြစ်ဖြစ် စားပွဲထိုးတွေ က “NO English” လို့ ပြန်ပြောတတ်တဲ့ အထိပါပဲ။ အမေရိက ကို ရောက်တာ နှစ်ပေါင်းကြာပေမယ့် အခုထက်ထိ အင်္ဂလိပ်လို မပြောတဲ့ မြန်မာတွေ၊ တရုတ်တွေ အများကြီးပါ။ လေ့လာမှုအားနည်းတယ် ပြောရမလား၊ ရိုးရာကို ထိန်းတယ်လို့ ပဲ ဂုဏ်ယူသင့်သလား မပြောတတ်ပါဘူး။
မြို့ ကလေးရဲ့ အားသာချက်တွေ ထဲမှာ နိုင်ငံပေါင်းစုံ က အစားအစာ ပေါင်းစုံ ကို အလွယ်တကူ ၀ယ်လို့ရတာလဲပါတယ်။ လမ်းဘေးတွေမှာ တွန်းလှည်းတွေနဲ့ တရုတ်၊ မက်စီကန်၊ အန္ဒိယ စတဲ့ အစားအစာ မျိုးစုံ ကို ဈေးနှုန်းသက်သက် သာသာနဲ့ ရနိုင်တယ်။ ဟော့ဒေါ့ တစ်ခု ကို ၂ ဒေါ်လာ ကနေ၊ ထမင်းနဲ့အသားကင် ၆ဒေါ်လာ လောက် ပဲ ကျတာမို့ ၊ စားသောက်ဆိုင်ကြီး တွေ မှာ ၀င်စားတာထက် စာရင် အတော်လေး ဈေး သက်သာပါတယ်။
နယူးဂျာစီမှာ နေတုန်းက တော့ တွန်းလှည်းနဲ့ ဆိုင်ဆိုတာ မမြင် ရ သလောက်ပဲ၊ ဆိုင်တွေ ကလဲ ဝေးတော့ ကားရှိမှ သွားလို့ ရမှာမို့ ..အစားမက်တဲ့ ကျွန်မ ဒုက္ခရောက်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
အမေရိက ရဲ့ မြို့ တွေ တော်တော် များများ ကို လျှောက်သွားကြည့်တော့ မှ ကျွန်မတို့ မြို့ ကလေး ရဲ့ ထူးခြားမှု တွေ ကို ပိုပြီး သတိထားမိလာတယ်။
နယူးယောက် မှာနေပြီး ၂ နှစ်လောက်မှာ ကယ်ရီဖိုးနီးယား ကို ကျွန်မ အလည်သွားတော့၊ မြို့ခံ တယောက်က “ဟေး..ဟောင်းအာယူ” ဆိုပြီး လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ လာ နှုတ်ဆက် တယ်။ “ငါနဲ့ လဲ မသိပဲနဲ့ လာ စကားပြောတယ်။ စိတ်မနှံ့ တာပဲ နေမှာပါ” လို့ ထင်ပြီး ကျွန်မ ဘာမှ ပြန်မပြောလိုက်မိဘူး။
နောက်တော့ … လမ်းမှာ ဆုံတဲ့ လူတိုင်း လိုလို၊ သိသိ မသိသိ တယောက်နဲ့တယောက် ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင် နှုတ်ဆက် ကြတာမြင်တော့ မှ “ အော်.. ငါ့မြို့ လေးက လူတွေ က မပြုံးနိုင်ကြပါလား၊ သိပ်ပြီး မဖော်ရွှေကြပါလား” ဆိုတာ သွားသတိထားမိတယ်။
လူတွေက သွားသုတ်သုတ်၊ လာသုတ်သုတ်နဲ့ဇောကပ်နေကြတော့ တယ်ပြီး မဖော်ရွှေ နိုင်ကြဘူးနဲ့ တူပါရဲ့ ။ အင်းလေ..ကျွန်မတောင် လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ မပြုံးတတ်တာ ကြာပါရောလား…။
Times Square မှာ ဆက်ပြီး ထိုင်နေချင်ပေမယ့် လဲ ည ၁၁ နာရီ ခွဲ ပြီမို့အိမ်ပြန်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ရတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ ဆိုရင်တော့ ဒီလောက် ညဉ့်နက်တဲ့ အချိန်ထိ မိန်းကလေး တယောက်တည်း အပြင်မှာ နေနေရသလား ဆိုပြီး မယုံသင်္ကာ မျက်လုံးတွေ နဲ့ ကြည့်ချင်သူတွေ ရှိပါလိမ့်မယ်။
နယူးယောက် မှာ တော့ ညနက်သန်းခေါင် ကနေ ၊ မိုး အလင်းပေါက်ခါနီး အထိ မိန်းကလေးတွေ တစ်ယောက်တည်း သွားလာတာ ကို အထူးအဆန်း တစ်ခု လို ဖြစ်မနေပါဘူး။ ကျောင်းချိန်၊ အလုပ်ချိန်တွေ မတူကြတော့ အဖော်ပါမှ ဆိုပြီး စောင့်နေဖို့လဲ မဖြစ်နိုင်ဘူးလေ။
ရထားပေါ်ရောက်တော့ .. နေ့ ခင်းပိုင်းမှာလို ထိုင်ခုံတွေ လုနေစရာမလိုဘူး။ ချောင်ချောင် ချိချိပါပဲ။ မြို့ပတ် ရထားတွေ ကလဲ မြေအောက်မှာ တောင် မက၊ ရေအောက်မှာပါ သွားလို့ ရအောင် ဖောက်ထားပါတယ်။ တချို့မှတ်တိုင်ကြီးတွေ မှာဆို.. မြေအောက်မှာ တောင် သုံးဆင့်လောက် ထပ်ခွဲထားသေးတယ်။ တချို့နေရာမှာ ရထားမှတ်တိုင်တွေ က မသန့် ရှင်းလှပေမယ့်၊ ကျွန်မတို့ လို ဖွံ့ ဖြိုးစ နိုင်ငံကနေ လာတဲ့ သူတွေ အတွက် တော့ သန့် နေပါသေးတယ်။
ကျွန်မစီးတဲ့ ရထားတွဲ ရဲ့ဘယ်ဘက် ဒေါင့် မှာ အိမ်ခြေရာမဲ့ လို့ ထင်ရတဲ့ အဖိုးအိုတစ်ယောက် က စောင်လေး တစ်ထည် ခြုံပြီး ခပ်ခွေခွေ အိပ်လို့ (နှင်းတွေ ထူထူထပ်ထပ်ကြတဲ့ ဆောင်းတွင်းမှာ မြို့ ပတ်ရထားထဲ ၀င်အိပ်ရတာ သူတို့အတွက် ပိုပြီးနွေးလို့ နဲ့တူပါတယ်။ ဆောင်းတွင်းမှာ ရထားတွဲတွေထဲ သူတို့ တွေ ကို မြင်တွေ့ ရတတ်ပါတယ်)
ကျွန်မရဲ့ အရှေ့ တည့်တည့် မှာတော့ လိင်တူချစ်သူ အမျိုးသားနှစ်ယောက်၊ ချစ်ရည်ရွှန်းတဲ့ မျက်ဝန်းတွေ နဲ့တယောက် ကို တယောက် လက်ကလေး ကိုင်လိုက်ကြ၊ နမ်းလိုက်ကြ နဲ့ လုပ်နေကြတယ်။ မြို့ ကလေးမှာ လိင်တူ ချစ်သူများ တရားဝင် လက်ထပ်ပိုင်ခွင့် ကို ၂၀၁၁ ဇူလိုင်လ တုန်းက မှ တရားဝင် ဥပဒေ ပြဌာန်း ထားတာပါ။ သူတို့ တွေ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ချစ်ကြပါစေဆိုပြီး မျက်လုံးတွေ ကို အသာမိတ်၊ ဖုန်းနားကြပ် ကို နားထဲထည့် ပြီး တင်ဇာမော်ရဲ့“စွဲလမ်းမှုပြသနာ” သီချင်း ကို နားထောင်ရင်း… ရထားပေါ်က အချိန်တွေ ကို ဖြိုနေလိုက်တယ်။
ရေအောက်မှာ ဖောက်ထားတဲ့ Tunnel ကို ဖြတ်ပြီးတဲ့ အခါ၊ ရထားက မြေပေါ် ပြန်ရောက်လာတော့ ကုလသမဂ အဆောက်အဦး ကို လှမ်းမြင်ရတယ်။ ကုလသမဂ ဌာနချုပ်ရှိ နေတဲ့ အတွက် မြို့ ကလေး က နိုင်ငံတကာ သံတမန်ဆက်သွယ်ရေး အတွက် အရေးပါတဲ့ နေရာလဲဖြစ်ပါတယ်။ မမြင်ရတဲ့ ဦးသန့် ကျွန်းကို စိတ်ကူးနဲ့ မှန်းကြည့်ရင်း ဂုဏ်ယူမိလိုက်သေးတယ်။
အိမ်ပြန် ရောက်တော့ ည ၁ နာရီ ထိုးခါနီးပြီ။ မြန်မာတွေ နေတဲ့ ရပ်ကွက် ဆိုတော့ ဘယ်အိမ်က မှန်းမသိ ဖွင့်ထားတဲ့ ခင်မောင်တိုး သီချင်းသံ ကို ခပ်သဲ့သဲ့ ကြားနေရတယ်။ ရေမိုးချိုးပြီးတော့ .. မျက်လုံးတွေ ကျယ်နေသေးတာနဲ့…Facebook ပေါ်တက်ပြီး သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ချက်တင် လုပ်ဖို့ကြည့်လိုက်တယ်။ ဒီအချိန် မြန်မာပြည်မှာ ဆို နေ့ ခင်းဖြစ်တော့၊ အလုပ်ထဲပဲ ရောက်နေကြသလား(ဒါမှမဟုတ်) အင်တာနက် ကွန်နက်ရှင် မကောင်းလို့ လား မသိဘူး။ တစ်ယောက်မှ ကို မတွေ့ ဘူး။ ဒါနဲ့ကွန်ပျူတာ ကို ပြန်ပိတ် ပြီး အိပ်ရာထဲ အသာ ၀င်လှဲ နေလိုက်တယ်။
အင်း..မနက်ဖြန် ဆို သောကြာနေ့ ။ လစာထုတ်ရမယ့်နေ့ ပဲ။ အိမ်လခ ၊ ဖုန်းခ နဲ့ကျောင်းအကြွေးတွေ ရယ်၊ တခြား အသုံးစားရိတ်တွေရယ် ပေးရဦးမှာပါလား…။
အဲဒါတွေ ပေးပြီးရင်တော့ နောက် ၂ ပတ် လစာ ပြန်ရတဲ့ အထိ ချွေတာပြီး သုံးဦးမှပဲ ။ နေထိုင်မှု စားရိတ်မြင့်လှတဲ့ နယူးယောက်မှာ ရသမျှ ၀င်ငွေ က အိမ်လစာ ပေးတာနဲ့ ကုန်သလောက်ပဲ။ အမေ့ ကို ငွေ မပို့ နိုင်တာ တောင် ကြာလှပြီ။ ဘယ်တော့များမှ ငွေစုနိုင်မလဲ….
အခုလို အိပ်နေရင်းနဲ့ငါသာသေသွားရင် ဘယ်သူမှ သိလိုက်မှာ မဟုတ်ဘူး။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်က ကျွန်မ အိမ်ရှေ့ခန်းမှာ နေနေတဲ့ ကိုးရီးယား အဘိုးကြီး ဆုံးသွားတာ ကျွန်မတို့ မသိလိုက် သလိုပေါ့ ။ အိမ်နီးချင်းပေမယ့်၊ ဘာသိဘာသာ နေတတ်တဲ့ ဒီနိုင်ငံရဲ့ ဓလေ့ ကြောင့် တယောက်နဲ့တယောက် ရင်းရင်းနှီးနှီးမရှိကြဘူးလေ။ ငါ့အလောင်း မပုပ်ခင် တွေ့ ကြဖို့ တော့ ကောင်းရဲ့ …အင်း..ငါ ဘာတွေ တွေးနေမိပါလိမ့်။
အတွေးပင်လယ် ထဲ မျောပါရင်း၊ သက်ပြင်းတွေ ကို ရှိုက်ထုတ်ရင်း နဲ့အခန်းကျဉ်းထဲမှာ ကျွန်မ လေရှုလို့မ၀ သလိုတောင် ဖြစ်လာတယ်။
စကန့် တိုင်းမြည်နေတဲ့ နာရီသံ တချပ်ချပ်က ကျယ်ကျယ်လောင်လောင် မြည်လို့ ။ နာရီကို ကြည့်လိုက်တော့ မနက် ၃ နာရီထိုးပြီ၊ မနက်ဖြန် ၉ နာရီမှာ အစည်းအဝေးရှိတယ် နောက်ကျလို့ မဖြစ်ဘူး…ပျော်အောင် အိပ်မှပဲ။
ခင်မောင်တိုးသီချင်းသံလဲ တိတ်သွားပြီ။ လူတွေ လဲ အိပ်ကုန်ကြပြီ။ ငါတယောက်တဲ မအိပ်သေးတာ နေမှာလို့တွေး နေတုန်း …အရေးပေါ် လူနာတင် ကားတစ်စီး အသံ ကျယ်ကျယ်လောင်လောင် နဲ့ အိမ်ရှေ့ လမ်းမပေါ်က ဖြတ်သွားတာကြားလိုက်တယ်။
အော်..မြို့ ကလေး လဲ မအိပ်သေးပါလား။
ပို့(စ) တင်တာလည်း သပ်ရပ်တယ်။
မအိပ်တဲ့ မြို့က အမျိုးသမီးလေးကို
အိပ်ချိန်တွေ ခိုးယူတတ်တဲ့ ရွာကလေးကနေ အအိပ်သိပ်မက်တဲ့ ဇီဇီမှ ကြိုဆိုပါကြောင်းး
အော်… ဒီက လှမ်းကြည့်တော့လည်း ဟိုဘက်ကမ်းက မီးထိန်ထိန်
ဟိုက လှမ်းကြည့်တော့လည်း ဒီဘက်ကမ်းက မီးထိန်ထိန်
ဘ၀ဆိုတာက သူ့နေရာနဲ့သူ သူ့အတိုင်းတာနဲ့သူ ရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေရတာပါပဲ
ဟာမိုနီကျအောင် ကိုယ့်ဖာသာကိုယ်လည်း မနည်းကြိုးစားနေရတယ်
တခါတခါ လူအိပ်ပေမဲ့စိတ်ကမအိပ်နိုင်လို့ ပလပ်ကျွတ်တာတွေလည်း မနည်း
ဟုတ်ပ .. ရွာလေးနဲ့ မစိမ်းသလိုပဲ… ပို့စ်တင်တာ ကျော့်ထက်တောင် သပ်ရပ်သေး…. အားပေးသွားပါတယ်…
.ရွာထဲကို စာရေးကောင်းသူတစ်ယောက်ရောက်လာလို့ကြိုဆိုပါတယ်ဗျာ :))
အဲဒီမြို့မှာ နေချင်လိုက်တာ ၊
မီးအမှောင် ထဲ မှာ နေရ သူက အလင်းကိုမျှော်သလို
အလင်းထဲ နေရသူကလဲ တစ်ခါ တစ်လေ မီးမှိတ်လို့ အိပ်ချင်ပါသတဲ့။
ဘ၀ ဆို တာ တစ်ယောက် ဘ၀ ကို တစ်ယောက် အားကျရင်း
ကိုယ့် ဘ၀ ကိုယ် မကျေ မနပ်ဖြစ်ရင်း နဲ့ ဘဲ အချိန်တွေ ကုန်သွားတတ်ပါသတဲ့
မစုဥာဏ် မတူခြားနားတဲ့ ပိုစ်တွေကိုမျှော်နေပါမယ်
မြို့ကို..လမ်းလျှောက်တာ.. ဟိုဖက်ထိပ်ဒီဖက်ထိပ်.. အပ်တောင်း-ဒေါင်းတောင်း.. အပြန်အလှန်…။
ဒါနဲ့ ပုံ ရန်အောင်ကလေ နယူးယောက်က မောင်ရန်လားဟင်….
ဟုတ်ပါတယ်။ နယူးယောက်က blogger ကိုရန်အောင် ရိုက်ထားတဲ့ ပုံလေးပါ။
နယူး​ယောက်​မှာဦး​ကြောင်​ရှိတယ်​တဲ့။ ​သတိ ​ကြောင်​ကုတ်​တတ်​သည်​။
post တင်ဖို့ တောင် စမ်းတ၀ါးဝါးနဲ့ကြိုးစားနေတဲ့ အချိန်မှာ အခုလို အချိန်ပေးပြီး comment တွေ ပေးသွားကြ၊ နွေးနွေးထွေးထွေး ကြိုဆိုကြတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီထက်ပိုပြီး ရေးနိုင်အောင် ကြိုးစားသွားပါမယ်။
နောက်ကျတဲ့ ကြိုဆိုမှုအတွက်လည်း ခွင့်လွှတ်ပါ။
မစုဥာဏ်ဆိုတဲ့ နာမည်လေးက ထူးခြားလှပနေသလို
ပိုစ့်လေးကလည်း နာမည်နဲ့လိုက်ဖက်ညီစွာ ထူးခြားလှပနေတယ်။
ဒီနေ့ ခေတ် မှာ အဖြူ တွေက ပိုပြီး ဖော်ရွေစိတ်ရှိပြီး လူကို လူလို့ မြင်တတ်ကြသလိုဘဲ။
ကိုယ့်ပြည် ကိုတော့ မပြောတော့ဘူး။
အရှေ့တိုင်း ဝင်လိုက်ပြီ ဆိုတာနဲ့ လူတွေ ကြည့်ရတာ မျက်နှာသေကြီး တွေ နဲ့။
နောက်ပြီး ကျေးဇူးနော် ဆိုတာ ကို လုံးဝ မကြားရသလောက်။
အိမ်ဖော် သုံးနေတာလဲ အရှေ့တိုင်း မှာ ဆိုတော့ လူ ကို လူ လို ဆက်ဆံနိုင်သလား အဲဒီမှာ တွေ့ မှာဘဲ။
ပိုစ့်ဖတ်ရင်း.. ကိုယ်မေ၇ာက်ဖူးတဲ့နယ်မြေအကြောင်း ဗဟုသုတရစေတာကိုပါ….
ပိုစ့်တွေ အဆက်မပြတ် ဖတ်ချင်နေမိပါကြောင်း
ရန်ကုန်မှာတော့ မအိပ်တဲ့ မြို့နယ်တွေ ရှိတယ်… ဗဟန်း ရွှေတိဂုံဘုရားရှေ့မုခ်နားက ရပ်ကွက်လေး.. လုံးဝ မအိပ်… ဘုရင့်နောင်က သီရိမင်္ဂလာဈေးသစ်လေး… တကယ်ကို မအိပ်ရဘူး…
ဖွံ့ဖြိုးပြီးသားနိုင်ငံတွေမှာ ရနေတဲ့ တန်းတူအခွင့်အရေးဆိုတာ ညနက်မှအိမ်ကို တယောက်ထဲပြန်ရင်လဲ အမျိုးသမီး အမျိုးသားဆိုတာထက် ကို့ကိတ်စနဲ့ကို လမ်းပေါ်သွားနေတဲ့ လူတစ်ယောက်လို့ဘဲ မြင်ကျတာ မျိုးထင်ပါရဲ့။ မြန်မာပြည်မှာတော့ ညဘက်လမ်းထွက်တဲ့ မိန်းမနဲ့ နေ့ဘက်လမ်းထွက်တဲ့ မိန်းမ ခွဲခြားပြီး ကြည့်နေတတ်ကျတုန်းပါဘဲ။ အခန်းငှားပြီး တယောက်ထဲနေရရင်တော့ မျက်စိမှတ် နားပိတ်ပြီးတော့ဘဲ နေရမလို
ပိုဆိုးတာက မြို့ခံမဟုတ်လို့ ဆွေမရှိမျိုးမရှိ တသီးတသန့်နေပြန်ရင် တမျိုးတွေးကျသေးတာ။
Shar Thet Man (92284 Kyats )